Unbelievable | Rochak Khabar
श्रीमानको लिङ्ग ठुलो भएको भन्दै बिहे गरेको एक हप्ता मै समन्ध बिच्छेद नाइजेरियन महिला आयशा दानुपाभाले आफ्नो श्रीमानको लिंग साह्रै ठुलो भएको भन्दै सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा हालेकी छन् । एक साताअघि मात्र भएको विवाह बदर गर्न माग गर्दै उनले मुद्दा हालेकी हुन् । आफ्नो श्रीमान अली मैजिनारीको लिंग धेरै ठुलो भएकाले आफूल...
26 Dec, 04:17 AM
पत्ता लाग्यो अनौठो तथ्य, पुरुषको शुक्रकिटमा हुन्छ सुन, सुन नभएसम्म गर्भ नै रहँदैन
वैज्ञानिकहरुले अनौठा र विश्वासै लाग्न नसक्ने तथ्यहरु एकपछि अर्को गर्दै उजागर गर्दै आएका छन् । 0
21 Dec, 01:12 PM
कस्तो अचम्म यी पुरुषसँग सम्भोग गर्न लाग्यो महिलाको लाइन !
बेलायतमा एक ४४ वर्षीय पुरुषलाई सेक्स अफरको ओइरो लागेको छ । तीन दिनमै उनलाई ५० भन्दा बढी महिलाले सेक्स प्रस्ताव राखेका छन् ।
17 Dec, 10:51 AM
अचम्म को कम्पनी , जसले नांगा फोटा धरौटी राखेर युवतीहरुलाई ऋण दिन्छ
बैकबाट ऋण लिनका लागि धरौटी अर्थात् जमानत राख्नुपर्दछ । तर चीनमा एउटा कम्पनीले धरौटीको नाममा कुनै जग्गाजमिन वा गरगहना जस्ता चिज होइन युवतीहरुका नांगा फोटा राख्दछ ।
10 Dec, 03:25 AM
एक एस्तो होटेल जहाँ छिर्नासाथ हुन्छ लोग्नेस्वास्नीको डिभोर्स
यो दुनियामा यस्तो आश्चर्यजनक होटेल पनि छ जहाँ छिर्नासाथ श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स हुन्छ । सोही कारण यो होटेलको नामै डिभोर्स होटेल रहन गएको छ ।
10 Dec, 03:23 AM
मानिस अप्रेसनद्वारा कुकुर बनेपछि
यो दुनियामा एक सय एक नमुना को फौज भरिएको छ । यस्तै एक नमुना छन् जसले सोखको चक्करमा आफ्नो अनुहारमा कुकुरको मुख लगाएका छन् ।
9 Dec, 03:01 AM
अनौठो प्रथा, जहाँ बिहेका लागि केटाले खानुपर्छ केटीको लठ्ठी
भारतको राजस्थानस्थित मारवाडमा एउटा अनौठो उत्सव मनाइन्छ । धींगा गवर भनिने उक्त उत्सवमा निकै अनौठो परम्परा निर्वाह गरिन्छ । जसमा अविवाहित युवतीहरुले अविवाहित युवकहरुलाई लखेटी लखेटी लठ्ठीले कुट्छन् । यसरी लठ्ठीले कुटिने युवकको बिहे पक्का हुन्छ ।
3 Dec, 03:37 AM
पैसामात्र हैन, सुन पनि निकाल्छ एटिएमले, जान्नुहोस एटिएमका रोचक तथ्य
हामीमध्ये धेरै जना एटिएम(अटोमेटिक टेलर मेसिन) चलाउन अभ्यस्त छौं । विश्वव्यापी रुपमै मानिसहरु कार्ड घुसारेर पैसा निकाल्न बानि परेका छन् । तर, के तपाईंलाई थाहा छ एटिएमको पिन नम्बर सँधै चार अक्षरको किन हुन्छ ? एटिएमबाट सबैभन्दा बेसी पैसा के बार निकालिन्छ होल...
21 Nov, 03:51 AM
महिलाको वक्षस्थल विरुद्ध कस्ता कस्ता अचम्म का कानून ?
दुनियाभर केही यस्ता देशहरु प्नि छन् जहाँ महिलाहरुलाई थरीथरीका बन्देज लगाइएका छन् । के तपाइँले यस्तो देशका बारेमा सुन्नुभएको छ जहाँ महिलाहरुको वक्षस्थलमाथि पनि विभिन्न खाले प्रतिबन्ध लगाइएको छ ?
21 Nov, 03:31 AM
न्यानो यौनांग सहितको सेक्स रोबोट आउँदै
पूर्णरुपमा काबिल यौनांग सहितको सेक्स रोबोट अर्को वर्षदेखि बजारमा आउने भएको छ । यो कुराले धेरैलाई खुसी प्रदान गर्ला । तर दुखको कुरा यसको भाउ मुर्छा नै पार्ने खालको छ । अर्थात् उक्त सेक्स रोबोटको मूल्य झण्डै १५ लाख रुपैयाँ पर्नेछ ।
21 Nov, 03:11 AM
दुलही बजार : जहाँ छानीछानी युवती किन्न पाइन्छ
सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ २१ औं शताब्दीको आजको युगमा पनि दुलही किनबेच हुने बजार लाग्दै आएको छ भनेर । यस्तो बजार बुल्गेरियाको स्टारा जागोर नामक शहरमा हरेक ३ वर्षमा यस्तो बजार लाग्ने गर्दछ ।
18 Nov, 01:25 PM
बाच्छो खाएको भन्दै अजिंगरको पेट काट्दा निस्कियो यस्तो
अजिंगरले ठूला ठूला जिव पनि सिँगै निल्दछ । अजिंगरहरुले कहिलेकाहीँ घरपालुवा जनावर खाइदिएर पनि किसानहरुलाई समस्यामा पारिदिने गरेका छन् । तर एउटा अजिंगरलाई भने नखाएको विष लागेको छ । फुलेको पेटकै कारण उसले अनाहकमा बाच्छो निलेको आरोपमा काटिनुपरेको छ ।
14 Nov, 03:34 AM
यी महिलाले हरेक दिन पिउँछिन् पुरुषको विर्य, गर्छिन् विर्य फेसियल
विज्ञहरुका अनुसार कैयन् फेयरनेस क्रिमहरुमा पुरुषको विर्य पनि मिलाइएको हुन्छ । अर्थात् पुरुषको शुक्रकिटयुक्त विर्यलाई सौन्दर्य प्रशाधनको रुपमा पनि गरिन्छ । तर एकजना महिला भन्ने सुन्दर बन्ने ध्याउन्नमा दिनहुँ पुरुषको विर्य पिउँछिन् । उनले थरीथरीका पेय पदार्...
14 Nov, 03:32 AM
अनौठो घटना : बिरामीको ‘पाद’का कारण अस्पतालमा आगलागी
यो घटना टोकियो मेडिकल सेन्टरमा हालै भएको हो । जापानको पत्रिका आशाही सिम्बुनका अनुसार ३० वर्षीय महिला उपचारको लागि सो अस्पतालमा गएकी थिइन् । उनै महिलाको वायूका कारण शल्यकक्षामा आगोलागी भएको अस्पतालले आरोप लगाएको हो ।
11 Nov, 01:16 PM
के तपाईले सुन्नु भएको छ ? यी हुन् मैनबत्तीले कपाल काट्‍ने हजाम ! सायद तपाईले आफ्नो कपालको नयाँ स्टाइलिस हजामकहाँ अहिलेसम्म कैचीले बनाउँदै आउनु भएको होला।
तर के तपाईले सुन्नु भएको छ की कपालको नयाँ स्टाइ बनाउने तरिका मैनबत्ती पनि हुन सक्छ?
10 Nov, 02:59 AM